Lucky Seven Hills Nine Foot Game ဆိုတာ ဘာလဲ။ - Lucky7 Casino Shan Koe Mee ရှမ်းကိုးမီး
2022 年5月5日	 2022 年6月 25 日
Lucky 7-ရှမ်းကိုးမှီးဂိမ်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
ဂိမ်းအစတွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ကစားသည့်ရှယ်ယာပမာဏကို “ဘဏ်” ထဲသို့ ထည့်သွင်းသည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ဘဏ်သို့အစုရှယ်ယာများကို ထုတ်ယူပြီး မည်သည့်ရှယ်ယာကိုမျှ ထည့်၍မရပါ။ စုဆောင်းထားသော အမြတ်ငွေအားလုံးကို ဘဏ်မှ အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင် ဘဏ်ကငွေအားလုံးဆုံးရှုံးပါက ဘဏ်တွင်ငွေပမာဏ နှစ်ဆပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။ မိမိဘဏ်တွင် အပ်နှံသည့်ပမာဏသည် ဘဏ်ငွေပမာဏ၏ အနည်းဆုံး 10%ကို အပ်နှံရမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံး 100 ကိုအပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ်တွင် ငွေမရှိတော့ပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရုတ်သိမ်းခံရမည်။ အခြားသူတစ်ဦးဖြင့် အစားထိုးပြီး ဘဏ်တွင်ငွေသုံးဆတိုးပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် “သတိပေးချက်”3ကြိမ်ခေါ်ဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သတိပေးချက်ကို ခေါ်ဆိုပါက အရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည် ပွဲစဉ်3လှည့်ပြီးနောက် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားလှယ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် ကျန်ရှိသောမည်သည့်ပမာဏမဆို အရောင်းကိုယ်စားလှယ်က ရရှိပါမည်။casino shan koe mee must win、GK888 Casino
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီကို ဖဲကတ်2ကတ်ခွဲထုတ်ပေးပြီး ၎င်းတို့ထပ်မံဆွဲလိုပါက ကတ်တစ်ကတ်သာ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကတ်တစ်ခုအား တွက်ချက်ရန်နည်းလမ်းမှာ ကတ်တန်ဖိုးများကို ပေါင်းထည့်ကာ နောက်ပြန်အမှတ်များ/နောက်ဂဏန်းများကို သာကြည့်ရသည်။ နံပါတ်မပါသောကတ်များ၏ တန်ဖိုးမှာ A=1, K=10, Q=10, J=10 ဖြစ်ပါသည်။ ( Joker သည် ရှမ်းကိုးမှီးတွင် မပါဝင်ပါ )။ ဥပမာ– စုစုပေါင်း 17 မှတ် သည် “7”ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း 24 မှတ်သည် “4” ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအတိုင်း တွက်ချက်ပါမည်။ ကစားသမား၏အမှတ်များတူညီပါက ကတ်အရေအတွက်ကို ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ– 7မှတ်ချင်းတူညီနေလျှင် 2ကတ် 7မှတ်ရသူသည် 3ကတ် 7မှတ်ရသူကို အနိုင်ရသည်။ ကတ်အရေအတွက် တူညီပါက တန်ဖိုးကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ A သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး A>K>Q>J>10>9>……..>2 အစဉ်လိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ– 4+3=7 ရှိသောကစားသမားကို 6+A=7 ရှိသောကစားသမားက နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမှတ်များ ကတ်များတူညီနေပါက ၎င်းတို့၏ အပွင့်ကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဖဲအပွင့်များတွင် အပွင့်4မျိုးရှိပါသည်။ Spade, Heart, Diamond နှင့် Club ဆိုပြီး ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ရှိပါသည်။ Spade သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး Club သည် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းကိုးမှီးတွင် အဓိကအချက်မှာ အပွင့်တူညီခြင်းသည် အကြိမ်ရေပိုရနိုင်ပါသည်။ ကတ်2ကတ်တွင် Spade, Spade တူညီပါက လောင်းကြေး 2ဆရရှိမည် ဖြစ်ပြီး 3ကတ်တွင် အပွင့်အကုန်တူပါက 3ဆရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်မှ ကတ်အားလုံးအားခွဲဝေပြီးလျှင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ကစားသမားအား စတင်၍ ဖမ်းနိုင်ပြီး မိမိကတ်နှင့် အနိုင်အရှုံးအား နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။ ဤဂိမ်းတွင် သင်သည် 8 သို့မဟုက်9ကို 2ကတ်ဖြင့် ရပါက သင်သည် ၎င်းကို “ဒို” ဟုဆိုကာ ကိုယ်စားလှယ်အားပြသရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်9ဒို သည် 8ဒိုကို အနိုင်ရသကဲ့သို့ ဒိုချင်းတူညီနေပါက အထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့ အပွင့်ချင်းယှဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Spade A နှင့် Spade 8 သည် ရှမ်းကိုးမီးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး “ဘုရင်” ဟုပင် တင်စားကြပါသည်။
PreviousLucky7ရှမ်းကိုးမှီးဂိမ်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
NextLucky7အအောင်မြင်ဆုံးကတ်ဂိမ်းဖြစ်သော Shan Koe Mi ကစားနည်း